Shiinaha Gelatin warshad Marshmallow iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Marshmallow, xumbada iyo xasiloonida xumbada waxaa badanaa loo isticmaalaa gelatin, oo ay ku xigto dhumuc iyo xoqitaan. Doorashada tilmaamaha kala duwan ee gelatin, ama isku darka gelatin leh istaarj wax laga beddelay iyo alaabada kale ee ceyriinka ah, waxaan diyaarin karnaa badeecooyin deggan oo leh cufnaan iyo muuqaal kala duwan.
70g sonkor granulated cad, 70ml biyo,
10 g budada gelatin, 70 ml biyo qabow,
Budada budada ah 30g, budada sonkorta 10g
1. Miisaan maaddooyinka loo baahan yahay ee loogu talagalay sugitaanka.
2. 10 g budada gelatin ah ayaa horay loogu kala diraa 70 ml oo biyo qabow ah oo la kariyey loogu talagalay sugitaan.
3. Ku rid budada galleyda dheriga kuna walaaq kuleylka yar ilaa 3-5 daqiiqo.
4. Shiil shiil, qabow oo ku dar budada sonkorta, qaado nus ka dibna ku sifee weelka si aad uga ilaaliso ku dhegidda.
5. Ku shub 70g sonkor cad oo granulated ah dheriga, ku dar 70ml biyo.
6. Dami kuleylka illaa inta biyaha sonkorta ka karkaraya iyo goobooyinka. Haddii uu jiro heerkulbeeg, ku qiyaas qiyaastii 100 ℃. Demi dabka marka hore.
7. Ku shub xalka gelatin ee lagu kala diro biyo qabow, mar labaad isku kari, oo dabka dami.
8. Qabooji ilaa kuleylka kuleylka yar (40-55 ℃).
9. Ku rid dhawr dhibcood oo liin dhanaan ah oo ku xaji xawaare sarre leh beedka korontada ku garaaca illaa ay ka weynaadaan oo xiiran yihiin,
10. Waxaad ku shubtaa weelka weelka oo xoq si aad dhaqso ugu xoqdo. Haddii heerkulka qolku hooseeyo oo ficilku gaabis yahay, marshmallow way fududahay in la adkeeyo, taas oo aan ku habboonayn qaabeynta.
11. Ku dheji lakabka istaarijka iyo sonkorta budada ah marshmallow qaboojiyaha illaa 3-4 saacadood. Isticmaal mindi si tartiib ah ugu soo wareeji wareegga weelka, rog batoonka, si tartiib ah u salaax dusha, oo jarjar qaybo yaryar.
Shuruudaha Imtixaanka ： GB6783-2013 Marshmallow
1. Xoog Jelly (6.67%) 220-260bloom
Hore: Gelatin Wixii Nacnac Cirridka
Xiga: Kaluun Gelatin